Technical tip - Mika Pipeline Technology Co, Ltd.
Raw zvinhu zvemagineti
Mazhinji emachira anogadzirwa nemakisi akasiyana esimbi isina hutambo. Kazhinji, vatengi vanoshandisa magnets kuti vaone kunaka kwezvinhu zvacho. Kana paine zvemagineti, zvinyorwa zvacho hazvina kunaka. Muchokwadi, zvakapesana ichokwadi. Magnetism zvinoreva kuti iyo yakasvibiswa ine yakanyanya kuomarara uye yakakwirira simba. . Nekuti ikozvino ma clamp anowanzogadzirwa ne austenitic stainless simbi yakaita se195, 301, 304, uye 316, mushure mekurapa kupisa, izvo zvisvinu zvinokwanisa kuve zvisiri zvemagineti, asi zvigadzirwa zvinoshandiswa kuburitsa macamps zvinofanirwa kusangana neukukutu. uye inosimbisa simba reiyo chigadzirwa pachayo. , Saka kuomarara uye kusimba simba rinogona kungosangana nechitonhora chakuzungunuka, izvo zvinoda kuti zvinyoro zvinyoro zvinyurwe mudura rakatetepa rinotonhora-rakapetwa. Mushure mekutonhora-kuchinjika, ivo vanobva vava vanowedzera kuomarara uye vozobereka magineti.
Basa re lubrication screws
Parizvino, iyo galvanized denga pane kabhoni simbi yakarongedzwa screws inoita basa reku lubricating. Yakawanda masimbi screws muDIN3017 clamp zvakare akaiswa mabhajeti, ayo anogona kutamba basa reku lubricating. Kana iwe usingade zinc zinc, iwe unoda wax yakakomberedzwa semafuta. Panguva ipi neipi, wax yakaomeswa ichaomeswa, tembiricha panguva yekufambisa kana nharaunda yakaoma inokonzeresa kurasikirwa, saka lubrication ichadzikira, saka zvinokurudzirwa kuti simbi yesimbi inoiswawo galvanized.
T-bolt tsambanhare nechitubu
T-bolt clamp nechitubu inowanzo shandiswa mune rinorema rori inotonhorera uye kuchaja mweya system. Icho chinangwa chechitubu ndechekuyananisa kuwedzera uye kusangana kwekubatana kwehose. Naizvozvo, kana uchiisa iyi clamp, iwe unofanirwa kutarisisa kusvika kumagumo kwechitubu haigoni kunyatsove pasi. Kana paine chaizvo matambudziko maviri pakupedzisira: imwe ndeyekuti chitubu chinorasikirwa nebasa raro rekuyananisa kuwedzera kwemafuta uye kubatana uye inova yakasimba spacer; kunyangwe izvi zvichigona kuderera neimwe nzira, hapana zvachose nzira yekugadzirisa mukuwedzera kwemafuta uye kubvumirana. Yechipiri ndiko kupisa kweiyo inosimbisa system, hose ichave nekumanikidza kwakanyanya kusimbisa, inokuvadza malipi epipi, uye nekuderedza zvakanyanya hupenyu hwevhisi yeiyo inosimbisa system.